Soo-saareyaasha Burcadka & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda Zodiac
Xirmooyinka Qalabka Bilowga Jumlada ah Qurxinta Guryaha Dharka Isdhaafka Xirfadaha Farsamooyinka DIY Qalabka DIY Qalabka Aquarius Qaab-dhismeedka Dharka. 15008
Qaabka loo yaqaan 'Gemini Pattern Needlework' oo daabacan xirmooyinka iskutallaabta iskutallaabta ah.
Xaraashka iibka kulul Qaabdhismeedka qurxinta guriga iskutallaabta tolida qalliinka dhejiska qalliinka dhejiska oo la dhigay 15007
Qaabka Jid jumlada ah ee loo yaqaan 'Capricorn Pattern Cross Stitch' 11CT Rinjiyeynta Sawir-gacmeedka Shaambadda Isku-dhafan ee Isku-dhafan oo loogu talagalay Qurxinta Guriga. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan. Badeecadani kuma timaaddo qaab sawir ah, haddii loo baahdo in si gooni ah loo iibsado
Qaabka iibka kulul ee sagittarius qurxinta guriga iskutallaabta tolida cirbadeynta qalliinka iskutallaabta. 15012
Xirmooyinka Qalabka Bilowga Jumlada ah Qurxinta Guryaha Dharka Isgoysyada Xirfadaha Farsamooyinka DIY Qalabka Sagittarius Qaababka Xaraashka Dharka. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan. Badeecadani kuma timaaddo qaab sawir ah, haddii loo baahdo in si gooni ah loo iibsado.
Xaraashka iibka kulul Miisaanka qurxinta guriga qurxinta iskutallaabta qalliinka dhejiska dusha sare ee 15011
Tilmaamaha Miisaanka 11CT ee daabacan Qalabka Xirmooyinka Qalabka Farsamaynta DMC ee Loogu Tala Galay Qalabka Loogu Talagalay Xaraashka Xargaha. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan.
Xaraashka iibka Hot Virgo qaabka guriga qurxinta iskutallaabta tolliinka qalliinka iskutallaabta qotomiyuhu. 15010
Qawaaniinta Virgo Qaabdhismeedka Qalabka daabacan ee daabacan xirmooyinka diillinta iskutallaabta. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan. Badeecadani kuma timaaddo qaab sawir ah, haddii loo baahdo in si gooni ah loo iibsado.
Iibinta iibka kulul Scorpio hannaankii qurxinta guriga iskutallaabta tolliinka qalliinka dhejiska qalliinka iskutallaabkiisu yahay 15009
Iibinta Xaraashka DIY Embroidery Scorpio Qaabka Shaqada Shaqa-gacmeedyo farshaxan gacmeed iskutallaab. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan.
Iibinta iibka Hot kansarka qaabka guriga qurxinta iskutallaabta tolliinka cirbadaha iskutallaabtiisu tahay 15006
Qaababka Kansarka 11CT daabacan Qalabka Xannibaadda Mashiinka Farsamaynta DMC ee la Tiiriyay ee Loogu Tala Galay Xaraashka Isdhaafka Isdhaafka. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan. Badeecadani kuma timaaddo qaab sawir ah, haddii loo baahdo in si gooni ah loo iibsado.
Xirmooyinka Qalabka Bilowga Jumlada ah Qurxinta Guriga Dharka Isgoysyada Farshaxanka DIY Qalabka DIY Qalabka Aquarius Qaab-dhismeedka Dharka 15005
Xaraashka iibka kulul ee qaabka 'Aquarius' qurxinta guriga iskutallaabta tolliinka qalliinka dhejiska iskutallaabta. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan.
Iibinta iibka kulul Qaabka qurxinta guriga ee iskudhafka iskutallaabta qalliinka dhejiska dhererkiisu yahay 15004
Qaabka Aries Qaabka Isgoyska Xarafka 11CT Rinjiyeynta Sawir-gacmeedka Shaambada Xannibaadda Isgoyska loo dhigay Qurxinta Guriga. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan.
Iibinta Hot Pisces hannaankii qurxinta guriga iskutallaabta tolliinka cirbadeynta qalliinka iskutallaabta qotomiyey 15003
Iibinta Xaraashka DIY ee Pibcesery Pisces Qaabka Shaqada Shaqa-gacmeed farsamo gacmeed iskutallaab. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan.
Iibinta iibka kulul Leo qaabka guriga qurxinta iskutallaabta tolliinka cirbadeynta qalliinka iskutallaabkiisu yahay 15002
Qiimaha wax soo saarka jumlada Leo jumlada Diy farshaxanka qalabka wax lagu tolo. Midabka dhalaalaya waa fududahay in lakala garto, shaashadu waa afargeesle aan leex leexan, dunta daabacan ee tayada lehna ma yaraato. Tayada ayaa istaagi karta imtixaanka, raacdeena tayada ayaa ah inay kaa qanciso. Kani waa DIY, alaabooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin inay keligaa sameeyaan.
Iibinta iibka kulul Taurus hannaankii qurxinta guriga iskutallaabta tolliinka qalliinka dhejiska qalliinka dhejiska oo la dhigay 15001
Iibinta Xaraashka DIY Dahabka Qaabka Taurus Qaabdhismeedka Shaashadda Xirfadaha Shaashadda iskutallaabta.